News from far west nepal
-२०७५ आश्विन १७
तत्कालिन नेकपा एमालेको जनसंगठन युवा संघ नेपालले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको लिज घोटाला प्रकरणबारे चासो देखाउन थालेको छ ।
मेयरहरुले आलटाल गरिरहँदा अदालतको हस्तक्षेप
कञ्चनपुरका छाडा चौपायाको समस्या रहेको स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्रमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर ईजलासले आदेश जारी गरेको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : अझै पनि प्रमाण मेटाउने काम रोकिएन
निर्मला हत्याकाण्डको प्रमाण मेटाउने काम अझै पनि जारी रहेको आशंका उत्पन्न भएको छ । दैनिक मानसखण्डले १ असोजमा होटल ओपेरा अगाडिलगायत महेन्द्रनगर बजारका १६ मध्ये सात क्यामेरा रहस्यमयी तरिकाले निर्मला हत्याकाण्डपछि बिग्रेका समाचार दिएको एक दुई दिनमैं होटल ओपेराको गेटसमेत पूरा कभर गर्न जडित क्यामेरा नै गायब भएको छ । अन्य क्यामेराको अवस्थाबारे नगरपालिका र प्रहरी नै जानकार छैनन् ।
लिज घोटाला : कांग्रेसले उछिन्यो, भत्काउनै पर्ने एजेण्डा
नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन अवैधानिक ढंगबाट लिजमा दिएको प्रकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै सो जग्गामा बनेका अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने माग गरेको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : कहाँ गायब भए बुढाऐर ?
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले बाहिरी रुपमा सक्रियता देखाइरहेको भए पनि अन्तर्यमा नेपाल प्रहरीले नै केही तथ्य लुकाउने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ ।
फेरि उस्तै पारामा उत्रियो कञ्चनपुर प्रहरी !
निर्मला हत्याकाण्डपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि केही सोझिएको कञ्चनपुर प्रहरीले फेरि उल्टासुल्टा काम गर्न थालेको छ । रंगेहात यौनक्रिडाको एक घटनाका पीडितको पक्षबाट पैरवी गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीको घरमा पुगेर प्रहरीले तर्साउन खोजेको छ ।
निर्मला हत्याकाण्डको मौका, लिज माफियालाई चौका
आन्दोलनका कारण जिल्लाका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षाका लागि व्यस्त रहेका बेला रिजर्भ एरियामा अवैध लिज लिएका केही व्यक्तिहरु भने मौका फाइदा उठाएर पक्की संरचना निर्माणमा जुटेका छन् ।
साँच्चै कलियुग आयो त ? नौ महिनाकी अबोध वालिका बलात्कृत !
तीजका दिन राति एक बजे अपहरणमा परेर ६ घण्टापछि उद्दार गरिएकी बालिकाको बलात्कार भएको खुलेपछि उपचारका लागि काठमाडौं लगियो
यो प्रमाण पनि नष्ट गरियो एसपी विष्टको कार्यकालमा !
निर्मला हत्याकाण्डमा अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्ने महेन्द्रनगर बजारक्षेत्रका सीसीटीभी क्यामेराको डाटा प्रहरीले नै नष्ट गरेको हुनसक्ने संकेत प्राप्त भएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड बारे अर्को खुलासा !
भीमदत्त नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा जडान गरेका १६ मध्ये ७ सीसी क्यामेरा एकसाथ बन्द भएको खुलासा । साउन १० गतेपछि होटल ओपेरा–उल्टाखाम मार्गका सबै क्यामरा बेकामे बने । ती क्यामरातर्फ सीआइबी र उच्चस्तरीय समितिको पनि ध्यान गएन ।
निर्मला हत्याकाण्ड : राजिनामा दिएर हिरो बनेका केसीको नाटकको यथार्थ !
निर्मला हत्याकाण्डको छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विरेन्द्र केसीको राजिनामा र फेरि काममा फर्केको घटना रहस्यपूर्ण देखिएको छ ।
निर्मलाको हत्यारा कठघरा नजिक !
भदौ ५ देखि ७ गतेसम्म चलेको जनताको आन्दोलनका क्रममा ‘बलात्कारी’ भन्दै केही व्यक्तिको नामसहित नारावाजी गरिएको थियो । साथै, सञ्चारमाध्यममा पनि केही व्यक्तिलाई इंगित गरिएको थियो । प्रहरीलेका सामु ती व्यक्तिको रगतका नमुना संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाउनुको विकल्प छैन ।
मिलेन दिलिपको डीएनए, आजै रिहा हुने सम्भावना
निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाब (योनीभित्रको तरलबस्तु)मा रहेको बलात्कारीको डीउनए र दिलिपसिंह विष्टको डीएनए फरक भएको पाइएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : प्रधानमन्त्रीलाई झुठो बोलाउने को ?
पंक्तिकारजस्ता व्यक्तिलाई केपी ओलीजस्तो व्यक्तिको यो ओरालोयात्रा रहस्यको विषय बनिरहेको थियो । भिजन, मिसन र कमिटमेन्ट पर्याप्त छ तर वातावरण किन बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्नले घोच्ने गरेको थियो । योग्य र सक्षम व्यक्ति पनि उहाँसँग छन् तर उहाँको रथ किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने जिज्ञासाले पनि सताइरहेको थियो । तर, निर्मला हत्याकाण्डका क्रममा भने ती सबै प्रश्न, पीडा र जिज्ञासाको एकमुष्ठ जवाफ पाइएको छ ।
हत्यारा पक्राउ पर्ने संकेत, एक दर्जन प्रहरीको जागिर चट हुने लक्षण , दिलिप आज छुट्न सक्ने, अंगुर जिसीको मिलेमतोको थप प्रमाण प्राप्त
अन्यथा फेरि महेन्द्रनगरमा आन्दोलन भड्किन सक्छ !
निर्मला हत्याकाण्डको छानविनका गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद सकिन एक साता पनि बाँकी छैन । १० भदौबाट काम सुरु गरेको समितिको २५ भदौमा म्याद सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा महेन्द्रनगरमा व्यग्रता पनि बढ्दो छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत १५ दिनको म्याद दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा अवस्था सम्वेदनशील देखिन्छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : महेन्द्रनगरमा गहन अनुसन्धान तर काठमाडौंमा भित्री चलखेल
‘शून्यबाट सुरु’ भनिएको निर्मला हत्याकाण्डको महेन्द्रनगरमा गहन अनुसन्धान चलिरहेको छ । तर, काठमाडौंमा भने चलखेलको संकेत प्राप्त भएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : विविध घटना
निर्मला हत्याकाण्डकन सूत्र मानिएका बम दिदीबहिनीबाट बयान लिने काम भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी कुवेर कडायतले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका भीमदत्त नगरपालिका २ का बविता बम र रोशनी बमबाट बयान लिने कार्य सुरु भएको बताए ।
निर्मला हत्याकाण्ड : प्रहरीले यसरी मेटायो प्रमाण (भीडीओ)
निर्मला पन्तको शव पाइएलगत्तै उनको शरीर र घटनास्थलबाट प्रमाण मेटाउन थालिएको खुलासा भएको छ । मानसखण्डलाई प्राप्त एक भिडियोमा ११ साउनमा प्रहरी शव पाइएको स्थलमा पुग्नेवित्तिकै प्रमाण नष्ट गर्ने काम सुरु भएको प्रमाणित भएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड : पाँच हजार फेसबुक आकाउन्ट छानबिनमा
निर्मला हत्या काण्डको बारेमा शंकास्पद अभिव्यत्ति फेसबुकवालमा लेख्ने पाँच हजार प्रयोगकर्ता उच्च स्तरिय छानबिन समितिको दायरामा आउने भएका छन् । उच्च स्तरीय छानबिन समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार आफ्नो फेसबुकवालामा घटनासँग जोडिएका शंकास्पद अभिव्यक्तिले लेख्ने प्रयोगकर्तालाई साईबर क्राईम विभागसँगको सहकार्य कार्य छानबिन गरिने छ ।
टीकापुर दोहर्‍याउन खोज्ने त्यो एम्बुलेन्स !
एक क्रुद्ध आन्दोलनकारीले महाकाली अञ्चल अस्पतालमा बिरामी पुर्‍याएर झलारी फर्कदै गरेको एम्बुलेन्स कब्जा गरी तीब्र गतिमा फरार भइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीहरुले रोक्न नसकेको भएको ठूलो दुर्घटना हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।
यस कारण फेरि भड्किन सक्छ आन्दोलन !
डिएसपी जीसी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अन्य अधिकृत तथा सीआइबीलाई सहयोग गर्न खटाइएका इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीका सई डिगरदेव पन्तलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित फेरि आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रहरीले निर्मला हत्याकाण्डमा सूत्रका रुपमा रहेका बम दिदीबहिनीलाई पक्राउ गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
जे डर थियो त्यही भयो महेन्द्रनगरमा !
नयाँ एसपी र सीडीओले काम थाल्न सकेनन् । उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीको काम पनि अवरुद्ध । महेन्द्रनगरमा अनिश्चितकालिन कर्फयू । प्रहरीको गालीबाट दुईको मृत्यु तीन घाइते भएको अपुष्ट खबर । अनियन्त्रित र नेतृत्वविहिन आन्दोलकारीले मच्चाए तोडफोड र आक्रमण ।
निरु पालले माग गरिन संसदीय समिति
सांसद निरु पालले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै भर्खरै निर्मला हत्याकाण्डमा संसदीय छानविन समिति बनाएर पठाउन माग गरेकी छन् ।